अधिकांश शक्तिपीठमा मन्दिरबाहिरैबाट दर्शन – Himalaya Television
–पूर्णप्रसाद मिश्र, रासस
२०७७ कार्तिक ८ गते १७:५५
८ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । नवरात्रका अवसरमा राजधानीका विभिन्न शक्तिपीठमा भक्तजनको भीड लाग्ने गरेकामा यो वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण धेरै मन्दिर बन्द छन् ।
प्रसिद्ध शक्तिपीठका रुपमा रहेको पशुपति क्षेत्रको गुह्येश्वरी मन्दिर चैतदेखि नै बन्द छ । नवरात्रका अवसरमा पनि मन्दिर नखुलेपछि यस वर्ष केही भक्तजनले बाहिरबाटै दर्शन गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष दीनेशकुमार डङ्गोलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी पशुपति क्षेत्रकै जयवागेश्वरीलगायत शक्तिपीठमा पनि बाहिरबाटै भक्तजनले दर्शन गरिरहेका छन् । भौतिक दूरी कायम गरेर आज बिहानसम्म मैतीदेवी मन्दिर प्रबन्ध समितिले निर्णय गरी खुला गरिएको थियो । आज बिहान सात बजेपछि भने प्रहरीले माथिको आदेश छ भन्दै मन्दिर बन्द गरेको महानगरपालिका–३० का वडाध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्दिर प्रबन्ध समितिका अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
मन्दिरमा साङ्लो लगाएर एक/एक जना मात्र दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समितिले जनाएको छ । प्रहरीले मन्दिर बन्द गराएपछि भक्तजनले बाहिरबाटै दर्शन गरी फर्किने गरेका छन् । महानगरपालिका–२९ स्थित कालिकास्थान मन्दिर भने भौतिक दूरी कायम गरेर खुला राखिएको अध्यक्ष कुश ढकालले बताउनुभयो । मन्दिरमा स्थानीय भक्तजनमात्र आउने भएकाले एक एक गरी दर्शन गर्न दिइएको छ । स्वयंसेवक खटाएर भक्तजनलाई दुई मिटरको दूरीमा राखी सुरक्षित रुपमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कालिकास्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव हरि लामाले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिका–११ स्थित भद्रकाली मन्दिर समेत भक्तजनका लागि बन्द गरिएको वडा अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले बताउनुभयो । बन्द गरिए पनि केही भक्तजन भने दर्शन एवं सवारी साधन पूजा गर्ने भन्दै भद्रकाली परिसरमा जम्मा भएका छन् । यसैगरी वडा नं.२२ मा पर्ने सङ्कटा मन्दिर पनि बन्द गरिएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलने खतरा देखिएकाले नित्य पूजाबाहेक सबै भीडभाड बन्द गरिएको वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रत्येक हप्ता शनिबार साँढे साती एवं शनिको अढैया भएकाको भीड लाग्ने महाङ्काल मन्दिर पनि बन्द गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित चार भगवतीमध्येको एक नक्साल भगवती मन्दिर पनि मूल ढोकामै ताला लगाई बन्द गरिएको छ ।
मन्दिर परिसरमा आउने भक्तजन सडकबाटै दर्शन गरेर हिँड्ने गरेको वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै वडा नं. १५ मा पर्ने शोभा भगवती मन्दिरमा भने मूल ढोकासम्म पुगेर दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्वयंसेवक राजाराम कपालीले बताउनुभयो । मन्दिरमा शुक्रबारभन्दा बिहीबार बढी भक्तजन लाम लागेका थिए ।
यसैगरी विष्णुमती नदी किनारमा रहेको कङ्केश्वरी मन्दिरमा पनि दूरी कायम गरी दर्शन गर्न दिइएको छ । त्यस क्षेत्रका रक्तकाली, श्वेतकाली, बिजेश्वरीलगायत मन्दिरमा दुरी कायम गर्दै सीमित भक्तजनलाई दर्शन गर्न दिइएको १९ नं. वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष सुमन खड्गीले बताउनुभयो ।
अधिकांश मन्दिर शक्तिपीठ